Ingaba umzi-mveliso okanye inkampani a?
Thina nje ukuba iifektri zethu kodwa abe izabelo kwezinye amanye amashishini.
Ngaba ukunikeza iisampulu?
Ewe, ukuba isampuli ifumaneka stock
Ngaba amalungiselelo zimpahla?
Ngokuqinisekileyo, thina forwarder imithwalo esisigxina ngubani na azuze ixabiso ilungileyo evela kwinkampani kakhulu emkhombeni benikela inkonzo yobungcali.
Oku kusekelwe phezu komyalelo, ngokwesiqhelo 15 - 20 iintsuku emva kokufumana imali okanye L / C kwi emehlweni.
Ingaba unayo nolawulo lomgangatho?
Ewe, siye wazuza BV , SGS ububhali.
Ngawaphi amagama intlawulo yakho?
100% ngesiphelo L / C kwi emehlweni. Okanye T / T , 30% kwangaphambili, kunye nokulungelelana ngokuchasene ikopi B / L kwiintsuku 3-5.